Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ngwaahịa ọhụrụ na-enyere ndị nwere nnabata nri aka ịnụ ụtọ iri nri ọzọ
Nri anabataghị nri na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ laghachi azụ na-eri nri. Ngwaahịa dabere na Enzyme nke Intoleran na-alụ ọgụ site n'ịkwado sistemu nri nri.
Akara ahụike Dutch Intoleran maara nke ọma mmadụ ole na-alụ ọgụ na nnabata. Dịka ọmụmaatụ, enweghị ndidi lactose - enweghị ike ịkụda na ịgbari shuga nke mmiri ara ehi nke ọma, lactose - bụ ihe a na-ahụkarị. Ụlọ ọrụ National Digestive Diseases Information Clearinghouse (site na Mahadum Cornell) na-akọ na ihe dị ka nde ndị America 50 enweghị lactose, na ọnọdụ ahụ na-ewu ewu karịsịa n'etiti African American, American Indian, na Asia American demographics.
Nnyocha ọzọ NIH kọrọ na ndị ọkachamara na-eme atụmatụ na 68% ihe ka ọtụtụ n'ime ndị bi n'ụwa na-ata ahụhụ site na lactose malabsorption. Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị ndị na-egosipụta mgbaàmà ka a na-ewere n'ihu ọha dị ka ndị na-adịghị anabata lactose, egwu zuru ebe niile nke nchegbu mgbari nri metụtara lactose na-agbasa gburugburu ụwa. Mgbe mgbaàmà na-eme, ha nwere ike ịka njọ nke ukwuu ma nwee ike ịmalite site na afọ ntachi na gas ruo n'afọ, ọgbụgbọ, na ọbụna afọ ọsịsa na vomiting.
Ma nke ahụ bụ naanị otu, enweghị ndidi. E nwekwara anabataghị fructans na galactans (dị ka galik, yabasị, na ọka wit) yana fructose (chere mkpụrụ osisi na mmanụ aṅụ) na sucrose (ezigbo shuga oge ochie sitere na ihe ọṅụṅụ, sweets, na sauces.) Ọtụtụ n'ime nchegbu ndị a mgbari nri. enwere ike ikwu okwu site na iji nri FODMAP, nke na-enyere ndị mmadụ n'otu n'otu aka ịchọpụta na ịchịkwa nri ndị ha na-enwe mmetụta.
Ọ bụ ezie na ịchịkwa nri mmadụ na-enye aka, ma n’oge na-adịghị anya, a ga-enwe oge ndị mmadụ chere ihu iri ihe ọ maara na ọ ga-emetụta ha. Ileta enyi, ịga oriri, ma ọ bụ naanị iri nri nwere ike iduga na nhọrọ nri nwere oke. Nke ahụ bụ ebe Intoleran batara na foto a.
Akara mgbakwunye Dutch kacha egbu egbu ejirila ihe karịrị afọ iri na-emezi ngwaahịa sitere na enzyme ya. Ndị a na-eleba anya na nke ọ bụla n'ime nnabata ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ma Lactase Drops na otu ụbọchị iji jikwaa anabataghị lactose. Fructase na-enyere aka na anabataghị fructose. Companylọ ọrụ ahụ emepụtala Quatrase Forte ọhụrụ ya, nke na-edozi ọtụtụ nnabata n'otu oge n'enweghị nsogbu. Ụdị onyinye a dịgasị iche iche na-eleba anya n'ọtụtụ nnabata dị iche iche bụ ihe pụrụ iche na ụwa ahụike.
Ebumnuche Intoleran na ngwaahịa ọ bụla ọ na-emepụta bụ ịkwalite sistemu nri nri. Ọtụtụ mgbe, nke a na-abịa site n'inye mgbakwunye nke enzymes digestive, nke a na-ezubere iche maka enweghị ndidi. Ihe ọ bụla enzymes na-adịghị ahụ anụ ahụ nwere ike ịgafe n'ụzọ na-adịghị njọ site na tract digestive, na-eme ka ngwaahịa Intoleran dị mfe ịnwale ka ndị mmadụ n'otu n'otu na-agbalị ịchọpụta ụdị nnabata ha chọrọ enyemaka iji lebara ya anya. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'oké mgbu iji ihe ndị dị ntakịrị. Mwepu nke ihe mgbakwunye ọ bụla na-adịghị mkpa na-eme ka a mara na ndị na-ege ntị nwere ike iji ngwaahịa ahụ mee ihe.
Ọ bụ ezie na Intoleran na-eje ozi na ahịa Europe n'oge gara aga, ụlọ ọrụ ahụ na-abanye na US, yana. Ka a na-ebupụ ngwaahịa ya n'ahịa North America n'ime ọnwa ndị na-abịa, Intoleran ga-enye ngwá ọrụ ọhụrụ, enyi na enyi iji nyere ọtụtụ iri nde ndị America aka ugbu a na-agbasi mbọ ike site na enweghị ndidi ka ha rie nri ha ọzọ.
Ọzọ na: ozi
FDA kwadoro ọgwụgwọ COVID-19 mbụ maka ụmụaka ozi|
Usoro otu ụbọchị ọhụrụ ozugbo iji chọpụta na ọgwụgwọ...